(Hadhwanaagnews) Tuesday, February 12, 2019 10:43:28
Shirkadda waxa aasaasay isla mulkiilaha shirkadda, Mudane Maxamed
Siciid Ducaale sannadkii 1970. Waxayna mulkiilaha iyo qoyskiisu markiiba u dhalan rogeen shirkaddii xawaalad caalamka oo idil ku baahda, oo Wakiilladeeda iyo Shirkadaha kale ee ay la bahowdey awood u siiya Macaamiisheedu inay lacago u soo diraan qoysaskooda iyo asxaabtooda ku nool Geeska Afrika. Shirkadda oo afartan sannadood ka hor hal goob ka soo aasaasantay, maanta waxa ka hawlgala oo u shaqeeya in ka badan 5000 oo qof oo adduunka meel kasta ka jooga.
Hadaba waxaynu kasoo qaadan karnaa doorkii lama ilaawaanka ahaa ee shirkada Dahabshiil u qabatay Bulshada Somalida Sannadihii tagay islamarkaan wakhtigan lajoogana ay ku guda jirto:
Masiibooyinka dabiiciga ah “ Abaaraha”
Haddaba, Shirkadda dahabshil Group oo ka kooban , Remittance ,Somtel, eDahab, Dahabshiil Bank, MicroDahab, Dahabshiil Motors iyo Hyundai ayaa Carwadii 8aad ee Ganacsiga ku soo bandhigtay wacdaro kala duwan oo dhinacyo badan lahaa, islamarkaana waxay qiimo dhimis u sameeyeen Macaamiishooda, sidoo kale waxa ay kusoo bandhigeen Carwadda Adeeg-yo Cusub oo uu ka mid yahay DahabPay Portal oo ah adeeg Online ah, waxa sidoo kale Shirkadda Dahabshiil Motors kusoo bandhigtay Carwadda Gawaadhidda Hyundai oo Markii u horeysay Dalka La keeno.
Waxa ka mid ahaa in shirkaddu la soo saxeexatay dalka aynu jaarka nahay ee Jabbuuti adeeg lagu xoojinayo Internet’ka oo Fibre Optic ah, qaybtiisa DARE 1. Internet’kaas waxa loogu talo galay in halka laga bilaabo Soomaaliya (South Central Somalia) uu gaarsiiyo adeegyo loo jeellanaa oo daku u ciillanaayeen, miyo iyo magaaloba. Adeeggaas waxa shirkadaha Dahabshiil group, gaar ahaan qaybteeda SOMTEL INTERNATIONAL, ugu talo gashay in macaamiishu kaga haqa-beesho u-adeegsiga Internet’ka iyo GSM’ka oo xawaare sare leh, dhinacyada Waxabarashada, Caafimaadka, Ganacsiga ( eCommerce), iwm.
Shirkaddu waxay bilowday TalkRemit. Adeeggan oo ku lifaaqan qaybna ka ah adeegyada sida darandoorriga dadku u mahadiyeen, waxa uu isku xidhay hadalkii, eDahab iyo Internetkii – oo aan midna midka kale u dhutinayn oo ugu wada shaqaynaya, ilbuidhiqsiyo gudaheedna u xiriirinaya Diraha iyo Loo-diraha.